10 app dịch chữ trên hình ảnh giúp bạn dễ dàng đọc hiểu mọi ngôn ngữ mọi lúc mọi nơi | Kotexpro - Kotexpro
10 app dịch chữ trên hình ảnh giúp bạn dễ dàng đọc hiểu mọi ngôn ngữ mọi lúc mọi nơi | Kotexpro
Ngaba ukhe waba kwimeko apho kufuneka uguqulele ngokungxamisekileyo isicatshulwa kwincwadi okanye imveliso kodwa ungazi ukuba loluphi ulwimi? Kukho neelwimi ekunzima ukuzichwetheza kwizixhobo zokuguqulela umbhalo, njengesiTshayina. Kodwa ungabi naxhala kuba zininzi iiapps zokuguqulela umfanekiso ezifanelekileyo ezinokusombulula le ngxaki, makhe sijonge!
Ukuba awuqhelananga nee-ideograms okanye amagama anqabileyo, ukuchwetheza kumguquleli ngesandla kunokuthatha ixesha elide. Siyintoni isicombululo? Sebenzisa usetyenziso lokuguqulela umfanekiso, udinga nje ukuthatha umfanekiso wombhalo kwaye i-app iya kuyiguqulela ngoko nangoko nokuba loluphi ulwimi. Ezinye ii-apps azifuni noqhagamshelo lwe-intanethi, ngoko ke unokufunda imiyalelo okanye ukupakishwa kwemveliso yangaphandle naphi na apho ukhoyo.
1 1. Isiguquli seeFoto
2 2. Umguquleli wekhamera
3 3. Umguquleli weKhamera: Guqulela+
4 4. GuqulelaZ
5 5. Guqula umfanekiso kunye nefoto
6 6. Guqulela Kwisikrini
7 7. Guqulela iFoto+ Skena ikhamera
8 8. Skena kwaye uguqulele
9 9. Umguquleli weefoto: Guqulela+
10 10. Iskena somfanekiso kunye nomguquleli wombhalo
10.1 8 Usetyenziso lokufota lwe-3D ukwenza oopopayi abenyezelayo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokungqubana
1. Isiguquli seeFoto
Isicelo sokuguqulela umfanekiso weSiguquleli seFoto sivuliwe ifowuni (Ifoto: Internet).
Esi sicelo siya kukunceda ukuba uguqulele nantoni na ngokukhawuleza. Thatha nje umfanekiso wombhalo kwaye ucofe kube kanye, usetyenziso luya kulubona ngokuzenzekelayo ulwimi kwaye luguqulele kuwe. Ungakwazi nokuguqulela imifanekiso ngelixa ungaxhunyiwe kwi-intanethi.
Esi sicelo sixhotyiswe ngeyona nkqubo iphambili ye-OCR (i-optical character recognition), inokuguqulela ngaphezulu kweelwimi ezili-100 emhlabeni, nokuba unjani na umgangatho womfanekiso olungileyo okanye umbi.
Isicelo sokuguqulela umfanekiso weFoto kwifowuni (Ifoto: I-Intanethi).
Unokubhalisa kwi-premium version ukuze ufumane iimpawu ezongezelelweyo kwaye ungakhathazeki ngeentengiso, ngokukodwa ukukwazi ukukhetha ixesha lokubhalisa. Esi sicelo asisebenzi ngasemva kwifowuni, ngoko ke asiyi kusebenzisa ibhetri eninzi. Inani lokukhutshelwa lifikelele ngaphezu kwesigidi esi-1 kwaye ubungakanani beapp yi-26MB kuphela.
2. Umguquleli wekhamera
Usetyenziso luxhotyiswe ngetekhnoloji yale mihla yokuqaphela umbhalo kunye noguqulelo olukhawulezayo lwalo naluphi na ulwimi. Inqaku elikhethekileyo kukuba unokufunda iilwimi zasemzini ngale app: thatha nje umfanekiso wento yokwenyani, kwaye inkqubo iya kuyibona ngokuzenzekelayo kwaye ibize igama layo ngalo naluphi na ulwimi oluthandayo.
Isicelo sokuguqulela umfanekiso weKhamera kwifowuni (Ifoto: I-Intanethi).
Umzekelo, ukuba awuyazi into “isonka” ngesiFrentshi, thatha umfanekiso wesonka ngale app kwaye uya kulazi igama ngoko nangoko. Zonke iinguqulelo zikumgangatho obalaseleyo, ngokungqinelana negrama yeelwimi. Ikwanayo nemo yokubhaliweyo yokuprinta nasiphi na isicatshulwa esisuka kumfanekiso.
Isicelo sinokuzibona ngaphezu kweelwimi ezili-100, ujongano olubonakalayo oluneempawu ezicacileyo kunye neemenyu, ezixineneyo ngobukhulu kwaye zikhutshelwe amaxesha angaphezu kwesigidi esi-1, xa ukusebenzisa akufuni mvume zininzi kwidatha yefowuni.
3. Umguquleli weKhamera: Guqulela+
Esi sicelo sikuvumela ukuba uguqulele imifanekiso ngexesha lokwenyani. Unokukhuphela naluphi na uxwebhu lokuguqulelwa, i-app iya kuskena uxwebhu lonke ngokukhawuleza, kwaye inokuchonga izinto eziya kuguqulelwa.
Umguquli weKhamera: Guqulela+ usetyenziso lokuguqulela umfanekiso efowunini (Umfanekiso: Intanethi).
Ukuba awuyazi ukuba loluphi ulwimi okubhalwe ngalo okubhaliweyo, sebenzisa umsebenzi woguqulelo oluzenzekelayo. Thatha nje ifoto kwaye ulinde i-app ukuyiskena, emva kwemizuzwana embalwa iya kubonisa ukuba yintoni ulwimi lokuqala kunye nokuguqulelwa kolunye ulwimi. Isicelo sixhasa amakhulu eelwimi, ngoko ngokuqinisekileyo siya kuhlangabezana neemfuno zakho.
Olu setyenziso lunokusetyenziswa njengoguqulelo lomfanekiso ukuya kokubhaliweyo, ngaphandle kokuchwetheza kwakhona umbhalo osuka kumfanekiso. Isicelo sixhasa iifomati ezininzi ezahlukeneyo zemifanekiso, zilungele kakhulu abafundi, ootitshala kunye nabahambi. Ushicilelo olukwinqanaba eliphezulu lunokubhaliswa ukuze lusebenzise amanqaku amaninzi.
TranslateZ isicelo sokuguqulela umfanekiso efowunini (Ifoto: I-Intanethi).
Esi sisicelo esiguquguqukayo esifanele sibe kwifowuni yakhe nabani na ofuna ukuguqulela iilwimi rhoqo. Kuya kuba luncedo olukhulu xa kuguqulelwa amaxwebhu anzima, ngakumbi xa kungekho nethiwekhi.
Ungaguqulela umbhalo ovela naphi na kwaye awudingi kufota kuba umguquleli wekhamera usebenza ngexesha lokwenyani: khomba nje ikhamera kumbhalo kwaye i-app iyayibona kwaye iyiguqulele kwiilwimi ezingaphezu kwe-120. kunye, kunjalo kulula kakhulu ukuguqulela iibhodi zebhulethi, iiwebhusayithi, iimagazini, njl.
Kukwakho nomsebenzi wokuguqulela ilizwi: nje “ukuphulaphula” isicatshulwa, isicelo siya kuchonga ulwimi kunye nokuguqulela, okuluncedo kakhulu xa uthetha nabantu basemzini. Isicelo silungele yonke iminyaka, i-interface iyilwe kakuhle kwaye ikhutshelwe amaxesha angaphezu kwe-100 lamawaka.
5. Guqula umfanekiso kunye nefoto
Ngaba ufuna ukuguqulela ngokukhawuleza incwadi yemigaqo yeziyobisi okanye ipowusta yemuvi? Le app iya kukunceda: thatha nje umfanekiso waso nasiphi na isicatshulwa kwaye siya kuguqulela ngokuzenzekelayo.
Isicelo sokuguqulela umfanekiso Guqulela umfanekiso kunye nefoto efowunini (Ifoto: I-Intanethi).
Ngokukodwa esi sicelo siluncedo kakhulu kubafundi beelwimi zasemzini kunye nomsebenzi wokuguqulela imifanekiso yezinto kulwimi. Ungaguqulela iimenyu zokutyela kunye namaxwebhu abalulekileyo, uthathe imifanekiso ngexesha lokwenyani, okanye ukhethe iifoto kwigalari yefowuni yakho.
Emazantsi esikrini kukho iqhosha lokutshintsha phakathi kweendlela ezi-2 zokusebenza: ukuguqulelwa komfanekiso okanye ukuguqulelwa kwento. Ukuqondwa kombhalo kuhle kwaye inguqulelo ikumgangatho ophezulu, kwaye unokuva nokubiza amagama ngendlela eyiyo. Usetyenziso alusebenzi ngasemva kwifowuni ngoko ke alutyi ibhetri eninzi.
6. Guqulela Kwisikrini
Guqulela kwiSkrini isicelo sokuguqulela umfanekiso efowunini (Umfanekiso: Intanethi).
Ngaba ufuna ukuguqulela umbhalo kwimifanekiso? Olu setyenziso lunokwenza okungakumbi: guqulela okubhaliweyo kwezinye iinkqubo ezivuliweyo.
Ungakwazi nokuthatha imifanekiso yeepowusta okanye iibhodi zezaziso, i-app iya kubonisa inguqulelo ngexesha lokwenyani, ujiwuzisa nje ikhamera emva naphambili ukuze ubambe umbhalo. Ukongeza, isicelo sikwavumela ukukopa umbhalo oguqulelweyo, ogcina ixesha elininzi.
Uyilo olulula kunye nojongano olubonakalayo. Esi sicelo ngokuqinisekileyo sifanelekile kwabo badlala imidlalo ngamagama ngeelwimi zasemzini, xa kungena umdlalo kuya kuvela iinguqulelo kwiilwimi ezininzi ezahlukeneyo, ezilungele kakhulu.
7. Guqulela iFoto+ Skena ikhamera
Esi sicelo siya kongela ixesha elininzi lokuguqulela iilwimi, thatha nje umfanekiso wombhalo ukuze isicelo siqaphele kwaye siguqulelwe, okanye sinokuguqulela amaxwebhu ngayo nayiphi na ifomathi ekhutshelweyo ngoguqulo olukumgangatho oPhezulu.
Isicelo sokuguqulela umfanekiso Guqulela iFoto + Skena iKhamera efowunini (Ifoto: Intanethi).
Unga hlela ifoto Skenwa njengesityalo, sondeza kwaye usondeze ukuze uqonde ulwimi olukhawulezayo kunye noguqulo. Iinguqulelo zinokudlala nakwirekhodi ukuze ufunde iilwimi zasemzini.
Ukuba ufuna iimpawu eziphucukileyo, rhuma kwinguqulelo eyandisiweyo ukuze ufumane iinguqulelo ezingenamda. Uguqulelo lobhaliso oluhlawulweyo lunokuzanywa kwiiyure ezingama-24, okanye emva kobhaliso unokurhoxisa nangaliphi na ixesha. Isicelo sinoyilo lwangoku.
8. Skena kwaye uguqulele
Skena kwaye uguqulele usetyenziso lwenguqulelo yomfanekiso efowunini (Umfanekiso: I-Intanethi).
Ukuba ufuna ukuguqulela ngokukhawuleza umbhalo osuka kwimifanekiso, kuya kufuneka uzame esi sicelo, thatha nje ifoto ngexesha lokwenyani okanye ukhuphele ifayile yomfanekiso equlethe umbhalo oza kuyiguqulela, isicelo sixhasa iifomathi ezininzi ezahlukeneyo zefayile.
Ukuba uyakonwabela ukufunda amaxwebhu angaphandle, layisha iinguqulelo zawo ze-elektroniki kwi-app ukuze uchonge ulwimi olulula kunye nokuguqulelwa. Ungabelana ngombhalo oguquliweyo naye wonke umntu okwiintanethi zentlalo. Isicelo sixhasa iilwimi ezingama-79 ezahlukeneyo, kunye nenkqubo yokuqonda igrama yanamhlanje kunye nenkqubo yokulungisa iimpazamo, ikhutshelwe amaxesha angaphezu kwesigidi esi-1 kwaye i-7.8MB kuphela ngobukhulu, ngoko ayithathi inkumbulo eninzi yefowuni.
9. Umguquleli weefoto: Guqulela+
Esi sisicelo esilula nesisemgangathweni sokuguqulela iskena esikwaguqula imifanekiso ibe kumbhalo ngojongano olucacileyo.
Isiguquli seFoto: Guqulela+ isicelo sokuguqulela umfanekiso efowunini (Ifoto: Intanethi).
Ukuba awukwazi ukukopa amagama ebhodini xa usiya esikolweni, thatha nje umfanekiso webhodi yonke kunye namagama kuyo, isicelo siya kuguqula umfanekiso ube ngumbhalo kunye nenguqulelo xa kuyimfuneko, iluncedo kakhulu kubafundi. Ulwimi olungaziwa.
Lo ikwangumncedisi osebenzayo kwabo bafuna ukuguqulelwa rhoqo, ngesantya esikhawulezayo sanamhlanje sokusebenza, inkxaso yeelwimi ezingaphezu kwama-50 kwaye unokuguqulela kwiilwimi ezingaphezu kwe-100. Ungahlela umbhalo oguquliweyo okanye uwukhuphele kwenye indawo. Usetyenziso lwenzelwe ukuba lube lula kwaye lube luncedo, akukho nto ingaphezulu, kwaye ayifuni mvume yokufikelela kwigalari yefowuni, ke ikhuselekile kwaye ithembekile.
10. Iskena somfanekiso kunye nomguquleli wombhalo
Isicelo sokuguqulela umfanekiso Iskena somfanekiso kunye nomguquli wombhalo efowunini (Umfanekiso: I-Intanethi).
Esi sisikena somfanekiso kunye nesicelo somguquleli esilungele kakhulu abafundi kunye nabakhenkethi. Emva kokuba uqalise kwaye uvule ikhamera, unokufota umfanekiso wombhalo ukuze ubone inguqulelo yexesha lokwenyani, okanye uthabathe ifoto oza kuyiguqulela kamva. Unokukhetha kwakhona umfanekiso oqulethe isicatshulwa kwigalari, okanye ulayishe ifayile yoxwebhu kwi-app. Ukuba awulwazi ukuba loluphi ulwimi loqobo, usetyenziso luya kuluqonda ngokuzenzekelayo.
I-interface iyilwe kakuhle kwaye intuitive, ngoko kulula ukuyisebenzisa. Abaphuhlisi nabo bahlala behlaziya kwaye bongeza iimpawu ezintsha. I-app ikhutshelwe ngaphezu kwe-500 lamawaka amaxesha.
Ezi zizona zokusebenza zokuguqulela umfanekiso kwi-Android kunye ne-iOS namhlanje, nceda uzikhuphele kwaye uzisebenzise kwaye ushiye inkcazo phantsi kwecandelo lokuphawula!
Nceda ubone amanqaku anxulumene ngakumbi eBlogAnChoi:
Nceda ujonge phambili kwiBlogAnChoi yonke imihla ukufumana ulwazi oluninzi olunomdla!
8 Usetyenziso lokufota lwe-3D ukwenza oopopayi abenyezelayo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokungqubana
Ngaba ukhe wazibona ii-selfies ezintle ze-3D kwi-intanethi kwaye ufuna ukuthatha i-selfie ngolo hlobo? Okanye ngaba ufuna ukubonisa ubunzulu bomhlaba ukuze ifoto ibe ngumsebenzi wokwenene wobugcisa? Zama ezi app zokufota ze-3D zinomdla kakhulu kwifowuni yakho ngoku!
READ BST 170+ hình ảnh chibi cổ trang nữ Trung Quốc đẹp, cute nhất | Kotexpro
Previous: Hoài Linh và Mr.Đàm bị chửi thẳng mặt, bà Nguyễn Phương Hằng chơi lớn đòi đánh giới nghệ sĩ | Kotexpro
Next: Vụ lùm xùm của nhóm nhạc AOA: Mina có thật sự bị Jimin bắt nạt? | Kotexpro